Dowladda Soomaaliya iyo Kenya oo ka wada hadlay dar dar gelinta howl galada ka socdda Jubooyinka – idalenews.com
Dowladda Soomaaliya iyo Kenya oo ka wada hadlay dar dar gelinta howl galada ka socdda Jubooyinka
Dowladda Soomaaliya iyo Kenya ayaa ka wada hadlay sidii loo dar dar gelin lahaa howl galada ka socda gobolada dalka, iyadoo Ciidamo ka socda Kenya oo qeyb ka socda AMISOM ay ku sugan yihiin Gobolada Jubooyinka iyo Gedo.
Wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi oo shalay dib Muqdisho ugu soo laabtay ayaa sheegay in isaga iyo dhigiisa Kenya Yusuf Xaaji ay ka wada hadleen arrimo badan oo ku aadan howl galada.
“Aniga iyo wasiirka gaashaandhiga Kenya waxaa ka wada hadalnay sidii loo dar dar gelin lahaa howl galada ka dhanka ah Al-Qaacida, waxaan is dhaafsanay talooyinka”ayuu yiri Wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya.
C/xakiin Fiqi ayaa sheegay inay isku afgarteen dhigiisa Kenya sidii ay isku dhaafsan lahaa sidii ay xogta labada dhinac isa siin lahaayeen, iyo sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen tababarka ciidamada, si loo xoojiyo dib u dhiska Ciidamada xooga dalka.
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya ayaa mudooyinkii u dambeeyay booqashooyin ku tagayay dalalka Kenya iyo Uganda oo ay Ciidamo ka joogaan Soomaaliya, waxaana uu kala hadlayay sii xoojinta howl galada iyo taageerida ciidamada dowladda.